Soo dejisan Dr.Fone toolkit for Android 10.2.1.76 – Vessoft
WindowsMultimediaTelefoonkaDr.Fone toolkit for Android
Bogga rasmiga ah: Dr.Fone toolkit for Android
Dr. Walwal Ftal for Android – software si loo xakameeyo qalabka Android iyo content. Software wuxuu ka kooban yahay qaybaha kala duwan, mid kastaa wuxuu leeyahay shaqadiisa uuna u qabtaa ficilada lagama maarmaanka ah ee qalabka. Dr. Fone qalabka loogu talagalay Android waxay awood u leedahay in ay soo celiso xogta ayna dib u soo celiso xiriirka lumay, SMS, sawirada ama xog kale oo ka yimid kaadhka xusuusta ama xusuusta gudaha ee telefoonka Android, oo ay ku jiraan qalabka burburay. Software wuxuu taageeraa inta badan aasaaska guuleysta ee aaladaha Android ee kala duwan kuwaas oo helitaankooda aan xadidneyn nidaamkooda la furay. Haddii ay dhacdo luminta erayga, software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka saarto koodhka furan ee shaashada qalabka, oo ay ku jiraan PIN-code, adoo isticmaalaya faraha ama qaabka. Sidoo kale Dr.Fone qalab loogu talagalay Android ayaa tirtira dhammaan xogta ka timid qalabka, kaadhka SIM-ka oo soo saaraya shaashadda qalabka.
Qalabka furitaanka qalabka haddii ay dhacdo in lumo lumo
Kordhinta xuquuqaha superuser
Qabashada shaashadda ee qalabka
Soo dejisan Dr.Fone toolkit for Android
Faallo ku saabsan Dr.Fone toolkit for Android
Dr.Fone toolkit for Android Xirfadaha la xiriira